နစေ့ဉျ ကွိုးစားခွငျး | မာသငျ
၀ငျစတနျခြာခြီ ရဲ့ပွောခဲ့တဲ့စကားတဈခှနျးက အောငျမွငျမှု ရဲ့လမျးစပါပဲ။
“Continuous effort – not strength or intelligent – is the key to unlocking our potential. “
ဝနျစတနျခြာခြီက …… စဉျဆကျမပွတျအားထုတျမှုမြား လို့သုံးသှားပါတယျ။
“အားကွီးလို့လဲမဟုတျဘူး၊ ဉာဏျကောငျးလို့လဲမဟုတျဘူး။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့စဉျဆကျမပွတျအားထုတျမှုမြားက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဖွဈနိုငျစှမျးအလားအလာ ကို အဆုံးစှနျတံခါးဖှငျ့ပေးလိုကျတာပါပဲ” လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အားလုံး ဟာ ကြှနျတျော တို့ နစေ့ဉျ စဉျဆကျမပွတျပွုလုပျတဲ့ အရာမြားရဲ့ရလဒျပုံရိပျမြားပဲဖွဈပါတယျ။
တဈနှဈလုံးမှာ နှဈပတျလညျနတေ့ဈရကျတညျး ကိုယျ့ ဇနီးကို ပနျးစညျးတဈစညျးပေးပွီးခဈြကွောငျး၊ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောတာထကျ…..
အဲဒီ ပနျးစညျးထဲက တဈပှငျ့ခငျြးစီကို နစေ့ဉျ တဈပှငျ့ကြ တဈနှဈလုံး ပေးပွီး ကြေးဇူးတငျကွောငျး၊ခဈြကွောငျးပွောတာ က relationship ကို ပိုပွီး ခိုငျမာပြျောရှငျစပေါတယျ။
တဈနထေဲ့တဈရကျထဲ စာအုပျတဈအုပျလုံးဖတျပွီး ဘာမှ ဦးနှောကျထဲမဝငျတာထကျ …..
တဈနကေို့ စာတဈမကျြနှာဖတျပွီး ခရြေးစရာ၊ စဉျးစားစရာ အိုငျဒီယာတှေ ရလိုကျတာက ပိုပွီး သာလှနျပါတယျ။
စိတျအားထကျသနျတုနျး၊ ကောကျရိုးမီးရှို့ဝုနျးကနဲ ထတောကျသလို၊ လကေ့ငျြ့ခနျးကို အပွငျးအထနျလုပျပွီး နောကျရကျတှဆေကျမလုပျတော့တဲ့အမှုအကငျြ့ထကျ….
နစေ့ဉျ စဉျဆကျမပွတျ တဈရကျကို ပုံမှနျ ၁၅ မိနဈလောကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာက ပိုပွီး ကနျြးမာ၊ပြျောရှငျစပေါတယျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးတိုငျးက Repeated Process ပါ။ ထပျခါထပျခါ လုပျရတဲ့လုပျငနျးစဉျကို စီးပှားရေးလို့ချေါတာပါ။ ကုနျပစ်စညျးကို လာဝယျတဲ့သူတှကေို ထပျခါထပျခါရောငျးရတယျ။ ဆိုငျကို နစေ့ဉျ ပုံမှနျဖှငျ့ရတယျ။ ဝနျဆောငျမှုကို တဈပုံစံတညျး ထပျခါထပျခါပေးရတယျ။
တဈခါလာ၊ ပုံစံတဈမြိုးဆိုရငျ စီးပှားရေးမဟုတျပါဘူး၊ အပြျောလုပျတာဖွဈသှားပါပွီ။ ထမငျးကွျောလာဝယျတာ တဈခါလာတော့ မြားမြားထညျ့ပေးတယျ၊ တဈခါလာတော့ နညျးသှားတယျ။ တဈခါလာတော့ ဆားငံတယျဆိုရငျတော့ စားသုံးသူကနောကျတဈခါလာမှာမဟုတျဘူးဆိုတာ အသအေခြာပါပဲ။
ကြှနျတျောတို့ဘဝမှာ စဉျဆကျမပွတျပွုလုပျခွငျးဆိုတာ အငျမတနျမှ အရေးကွီးတဲ့ တဈခုတညျးသော စကားလုံး တဈလုံးဖွဈပါတယျ။
အကွောငျးအရာတဈရပျကို ဒီနကေ့စပွီး နစေ့ဉျစဉျဆကျမပွတျပွုလုပျသှားဖို့ဆုံးဖွတျခကျြခပြါ။
နေ့ စဉ် ကြိုးစားခြင်း
၀င်စတန်ချာချီ ရဲ့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက အောင်မြင်မှု ရဲ့ လမ်းစပါပဲ။
၀န်စတန်ချာချီက …… စဉ်ဆက်မပြတ်အားထုတ်မှုများ လို့ သုံးသွားပါတယ်။
“အားကြီးလို့လဲမဟုတ်ဘူး၊ ဥာဏ်ကောင်းလို့ လဲမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်အားထုတ်မှုများက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖြစ်နိုင်စွမ်းအလားအလာ ကို အဆုံးစွန်တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တေ်ာတို့ အားလုံး ဟာ ကျွန်တော် တို့နေ့စဉ် စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်တဲ့ အရာများရဲ့ ရလဒ်ပုံရိပ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်လုံးမှာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ တစ်ရက်တည်း ကိုယ့် ဇနီးကို ပန်းစည်းတစ်စည်းပေးပြီးချစ်ကြောင်း၊ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတာထက်…..
အဲဒီ ပန်းစည်းထဲက တစ်ပွင့်ချင်းစီကို နေ့စဉ် တစ်ပွင့်ကျ တစ်နှစ်လုံး ပေးပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ချစ်ကြောင်းပြောတာ က relationship ကို ပိုပြီး ခိုင်မာပျော်ရွင်စေပါတယ်။
တစ်နေ့ ထဲတစ်ရက်ထဲ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးဖတ်ပြီး ဘာမှ ဦးနှောက်ထဲမ၀င်တာထက် …..
တစ်နေ့ ကို စာတစ်မျက်နှာဖတ်ပြီး ချရေးစရာ၊ စဉ်းစားစရာ အိုင်ဒီယာတွေ ရလိုက်တာက ပိုပြီး သာလွန်ပါတယ်။
စိတ်အားထက်သန်တုန်း၊ ကောက်ရိုးမီးရှို့ ဝုန်းကနဲ ထတောက်သလို၊ လေ့ကျင့်ခန်းကို အပြင်းအထန်လုပ်ပြီး နောက်ရက်တွေဆက်မလုပ်တော့တဲ့ အမှုအကျင့်ထက်….
နေ့ စဉ် စဉ်ဆက်မပြတ် တစ်ရက်ကို ပုံမှန် ၁၅ မိနစ်လောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ပိုပြီး ကျန်းမာ၊ပျော်ရွင်စေပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းက Repeated Process ပါ။ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို စီးပွားရေးလို့ ခေါ်တာပါ။ ကုန်ပစ္စည်းကို လာဝယ်တဲ့ သူတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါရောင်းရတယ်။ ဆိုင်ကို နေ့ စဉ် ပုံမှန်ဖွင့်ရတယ်။ ၀န်ဆောင်မှုကို တစ်ပုံစံတည်း ထပ်ခါထပ်ခါပေးရတယ်။
တစ်ခါလာ၊ ပုံစံတစ်မျိုးဆိုရင် စီးပွားရေးမဟုတ်ပါဘူး၊ အပျော်လုပ်တာဖြစ်သွားပါပြီ။ ထမင်းကြော်လာဝယ်တာ တစ်ခါလာတော့ များများထည့်ပေးတယ်၊ တစ်ခါလာတော့ နည်းသွားတယ်။ တစ်ခါလာတော့ ဆားငံတယ်ဆိုရင်တော့ စားသုံးသူကနောက်တစ်ခါလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာ စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ တစ်ခုတည်းသော စကားလုံး တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ကို ဒီနေ့ ကစပြီး နေ့စဉ်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။
နေ့ စဉ်တိုးတက်သောဘ၀များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။